Ireo fampianarana azonao mandritra ilay IRAY (1) VOLANA MAIMAIM-POANA
Tolotra fototra na tolotra « tantara » :
Herinandro voalohany : Tantara iray mampiseho antsika ny famadihana ny « impossible » ho « possible ».
Herinandro faharoa : Tantara iray maneho tsiambaratelo iray lehibe izay ahafahana mamaha izay olana saro-bahana indrindra.
Herinandro fahatelo : Tantara iray maneho fa ny tsy fananana fahaizana dia TSY sakana amin’ny fahombiazana.
Herinandro fahaefatra : Tantara maneho tsiambaratelo iray vitsy mpahalala izay manamora ny fahazoanao izay tadiavinao amin’ny fiainana.
Tolotra ambaratonga voalohany (tolotra fototra miampy ireto ambany ireto) :
Herinandro voalohany : Fampianarana momba ny « point de départ » iaingana irosoana any amin’ny fahombiazana.
Herinandro faharoa : Fampianarana momba ny fampiasana ny « eritreritra » mba hanampy anao handroso amin’ny fiainana.
Herinandro fahatelo : Ireo torohevitra 6 izay mahatonga anao ho « expert » ikoizana amin’ny sehatra misy anao, na tsy manana diplaoma na iray aza ianao !
Herinandro fahaefatra : Fampianarana momba ny fomba fiatrehana ny sakana mitranga amin’ny fiainana. Ahoana no hamadihana izany ho fanoitra manosika any amin’ny fahombiazana.
Tolotra ambaratonga faharoa (tolotra fototra + tolotra ambaratonga voalohany miampy ireto ambany ireto) :
* Ny lohahevitra ianarana amboniny amin’ity ambaratonga ity dia ny atao hoe « Maîtrise financière »
Herinandro voalohany : Ny fomba fahitana ny vola amin’ny sarangan’olona samihafa. Ny fomba fijery iray manosika ny olona hivoatra ara-bola, ny fomba fijery iray kosa dia miteraka fahasahiranana.
Herinandro faharoa : Ny fiaraha-monina iainantsika sy ny vola. Inona ireo sakana apetraky ny fiaraha-monina izay mahatonga ny olona sahirana ara-bola.
Herinandro fahatelo : Inona no ataon’ny manam-bola ka mahatonga azy manana ary mijanona ho manana (izay tsy ataon’ny tsy manana ary mahatonga azy ireo ho sahirana lava).
Herinandro fahaefatra : Toe-tsaina roa (2) mifanipaka eo amin’ny manana sy ny tsy manana. Inona avy izy ireo ary inona no aterany.
Tsy ireo ihany nefa fa misy koa ny fampianarana mitokana
1. "Subconscient Avancé & Auto-Hypnose"
2. "Fametrahana fahatokisan-tena - Confiance en soi"
izay azonao arahina sahady koa amin'io iray volana maimaim-poana io.
Manorata anarana eto ambany ary dia mirary anao mba hiroso hatrany amin'ny fiainana ary hahatratra izay tanjona rehetra kendrenao. Tonga dia azonao jerena avy hatrany ny fampianarana amin'ny herinandro voalohany (maimaim-poana izany).